तपाईले कहिल्यै सेतो काग देख्नुभएको छ ? यसबारे पौराणिक र वैज्ञानिक तथ्य यस्तो छ « Lokpath
२०७६, १० मंसिर मंगलवार १६:३२
तपाईले कहिल्यै सेतो काग देख्नुभएको छ ? यसबारे पौराणिक र वैज्ञानिक तथ्य यस्तो छ
प्रकाशित मिति : २०७६, १० मंसिर मंगलवार १६:३२
काठमाडौँ । तपाईले अक्सर घरको छतमा कालो रङ्गको काग बसेको देख्नुभएको होला । तर के तपाईले सेतो रङ्गको काग देख्नुभएको छ ? हामी सबै यहि सोच्छौं की काग कालो रङ्गको मात्र हुन्छ । र कसैले यो प्रश्न गरेमा तपाईले जवाफ दिइहाल्नुहुन्छ सेतो पनि काग हुन्छ र ! काग त कालो पो हुन्छ ।
हाम्रो आसपास कालो रङ्गका कागहरु प्रशस्त पाइन्छन् । तर भारतको मध्ये प्रदेशमा कहिले काही सेतो रङ्गको देखिने गरेको छ । सेतो रङ्गको काग देखिएमा शुभ हुने त्यहाँका स्थानियहरु बताउँछन्। केही समय अगाडी मध्ये प्रदेशको दतवाडामा सेतो रङ्गको काग देखिएको थियो । यस भन्दा पहिले २०१७ मा मध्ये प्रदेशको सतनामा सेतो रङ्गको काग देखिएको थियो ।
कसरी भयो कागको रङ्ग कालो ?
पौराणिक मान्यता अनुसार, पहिले कागको रङ्ग सेतो हुने गर्थ्यो । तर अमृत मन्थनपछि अमृतको लोप गर्दा यसको रङ्ग कालो हुन पुग्यो । मान्यताका अनुसार धेरै लामो समय पहिले ऋषिले एक सेतो कागको अमृत खोज्नका लागि उसलाई आदेश दिएको थियो । कागले अमृतको जानकारी प्राप्त गर्यो तर उसले अमृत पिउन भने गल्ती गर्‍यो । धेरै लामो समयसम्म कागले अमृतको खोजीमा भौतारी रह्यो । अन्तत एक दिन उसको कठिन परिश्रमका कारण अमृत प्राप्त गर्यो । तर उसको मनमा अमृत पिउने लोभ आयो र उसले त्यस अमृत पियो । त्यसपछि उ ऋषि भएको ठाउँमा रित्तै फर्कियो । ऋषिले अमृत किन नल्याएको भनेर सोध्दा कागले सबै सत्य कुरा बतायो । कागले अमृत पिएको कुरा सुनेपछि ऋषि क्रोधित भएर उसलाई श्राप दिए । ऋषिको वचन भङ्ग गर्नका लागि उसले आफ्नो अपवित्र चुच्चोले पवित्र अमृतको जुठो गर्‍यो । मानिसहरुले उसको चुच्चोलाई घृणा गर्दे आएका छन्। यति मात्रै होइन ऋषिले कागलाई आफ्नो कुडलीको कालो पानीमा डूबाएर उसको रङ्ग कालो गराइदिए । त्यस पछी काग रङ्ग कालो भएको मान्यता रही आएको छ ।
यस्तै वैज्ञानिकहरुले सेतो रङ्गको कागमा फरक तर्क गर्दै आएका छन्। वैज्ञानिकहरुका अनुसार सेतो काग पनि कालो कागहरु जस्तै हुन्छन्। तर अनुवांशिकता दोष ‘ल्यसीज्मका’ कारण केही कागको रङ्ग सेतो हुने गर्छ । वैज्ञानिकका भनाइ अनुसार, संसारमा कागको यति धेरै प्रजाति रहेको छ । जसको शरीरिरमा कुनै कुनै स्थानमा सेतो रङ्ग रहेको हुन्छ । एजेन्सी
मानिसलाई टोकेपछि तड्पिएर आफैँ मर्यो सर्प
काठमाडौं । सर्पले टोकेपछि अधिकांश मानिसको मृत्यु हुन्छ । तर के तपाईले कहिल्यै
तमु धिंद्वारा गण्डकी अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
डोटीमा एक सुत्केरीको मृत्यु
सरकारले नचिनेको शिक्षक